'मर्जरका लागि बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक छ' - नेपाल समय
'मर्जरका लागि बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक छ'
जीवन बिमा व्यवसायका माध्यमबाट आर्थिक स्रोतसाधनलाई जीवन बिमा शुल्कका रुपमा संकलन गरी देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने र समग्र नेपालीको जीवनस्तर सुदृढ तुल्याउने अभिप्राय लिई युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड दुइ वर्षअघि स्थापना भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २ अर्ब १५ करोड र जारी तथा चुक्ता पुँजी रु २ अर्ब १५ करोड छ। सो पुँजीमध्ये ७० प्रतिशतले हुने रु। १ अर्ब ५० करोड ५० लाख संस्थापक समूहको र ३० प्रतिशतले हुने रु।६४ करोड ५० लाख सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको छ। बिमासम्बन्धी नयाँ योजना तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा प्रदान गर्ने, बिमा व्यवसायको प्रवर्धन गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने, सेयर धनीहरु र बिमितहरुको लगानीको उचित प्रतिफल प्रदान गर्नेलगायत मूल उद्देश्य लिइ यो कम्पनी सञ्चालन भइरहेको छ। कम्पनीका पछिल्ला गतिविधि, बिमा क्षेत्रमा खेल्ने भूमिका तथा आगामी रणनीतिबारे कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णसँग नेपाल समयले गरेको कुराकानी :
बजेटले बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। मर्जरबारे यहाँहरुको धारणा के छ ?
अहिले भएका १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरु धेरै नै हो। भारतमै एक अर्ब ३० करोड जनतामा २४ वटा मात्र जीवन बिमा कम्पनी छन्। तर नेपालमा करिब तीन करोड जनसंख्यामा १९ वटा कम्पनी धेरै हो। मर्जमा गएमा राम्रो हुन्छ। तर सरकारले भन्नेबित्तिकै मर्ज भने हुँदैन। धेरै बिमा कम्पनीहरुमा क्रस होल्डिङको समस्या छ। एउटै व्यक्तिहरुको धेरै कम्पनीमा सेयर छ। उनीहरु एकआपसमा मर्ज गर्नुपर्छ। अहिले बिमा बजार खाली भएका कारण कम्पनीहरुले व्यापार पाइरहेका छन् तर केही वर्षपछि कम्पनीहरुले व्यापार पाउने छैनन्। कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरिदिए भने मर्जरमा बाध्य भएर जानुपर्ने हुन्छ।
बिमा कम्पनी मर्जरका लागि के कस्ता व्यवस्था आवश्यक छ ?
बिमा कम्पनीहरु आफू मर्जरमा जान इच्छुक छैनन् तर बाध्यात्मक अवस्था आएमा मर्जरमा जान्छन्। कुनै पनि कम्पनीको प्रवर्द्धक, सञ्चालक वा व्यस्थापनका मानिस मर्जरमा जान चाहँदैनन्। त्यसका लागि सरकारले नै फोर्स मर्जर गराउनु जरुरी छ। क्रस होल्डिङ कम्पनीहरुबाट मर्जर थाल्ने हो भने बिमा कम्पनीहरुलाई राम्रो हुन्छ।
बिमा समितिले केही समयअगाडि कम्पनीलाई मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर त्यसको प्रतिफल त देखिएन नि ?
मर्जर निर्देशिका ल्याएर पुँजी बढाउन बाटो सहज बनाइदिएको हो बिमा समितिले। बिमा कम्पनीहरुले दुई अर्ब पुँजी नपुर्‍याएमा कम्पनीहरु मर्जमा पनि जान सक्नेछन्। तर कम्पनीहरु आफैं पुँजी पुर्‍याउन लागिरहेकाले मर्जरतर्फ नलागेका हुन्।
बिमा १८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा पुगेको भनेर सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो। यस उपलब्धिप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले बिमाको पहुँच १८ प्रतिशत भनेको पोलिसी जारी गरेको मात्र हो। अहिले अन्डर इन्स्योरेन्स भइरहेको छ। जस्तै कसैले एक करोडको बिमा गर्न सक्छन् तर उसले जम्मा १० लाखको मात्र बिमा गरेको छ भने त्यो अन्डर इन्स्योरेन्स हो। फुल इन्स्योरेन्स गर्नेहरु भनेको तीन प्रतिशत मात्र होला। इस्योरेन्सको पहुँच बढ्नु एउटा पाटो भयो। अब हाम्रो आवश्यकताअनुसार इस्योरेन्सको विस्तार गर्नका लागि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
बिमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ भनिन्छ। युनियन लाइफ कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
युनियन लाइफसँग बिमा राम्रोसँग जानेको टिम छ। यो टिमले कसरी अभिकर्ता उत्पादन गर्ने र कसरी बजारमा जाने भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेको छ। गत वर्ष युनियन लाइफले ८६ करोड ५० लाखको व्यवसाय गरेको छ भने अहिले तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ६० करोडको व्यवसाय गरेका छौँ। नयाँ कम्पनीहरुमा युनियन लाइफ नै अगाडि छ। यसको मुख्य कारण भनेको हामीले अभिकर्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका छौं। हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छैनौं।
अहिले बैंक र बिमा कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरी बैंकहरुले बिमा पोलेसी बिक्री गर्ने गर्छन्। तर, ग्राहकले नचाहँदा नचाहँदै पनि बैंकहरुले जबरजस्त बिमा गराइरहेका छन् भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ नि ?
बैंकहरुले गरेको इन्स्योरेन्स बैंकास्योरेन्स होइन। यो शब्द नै गलत हो। बैंकास्योरेन्सको आफ्नै रुप रेखा र प्लानिङ हुन्छ। अहिले बैंकहरुले लिएको कर्पोरेट एजेन्सी मात्र हो। जसरी एकजना व्यक्तिले एजेन्सीका रुपमा काम गरेको हुन्छ। त्यसैगरी बैंकले पनि संस्थागत एजेन्सीका रुपमा काम गरेको हो। बैंकले बिमा गर्दा जनताको नै जोखिम कभर हुने हो। बैंकका ऋणीको कुनै कारणले मृत्यु भयो भने सडकमै जानुपर्ने अवस्था त हुँदैन नि। यो राम्रो हो तर कसैले जबरजस्त गराउँछन् भने त्यो नराम्रो हो।
खुला सीमाका कारण नेपालको बिमा भारतमा भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएका छन्। बिमा कम्पनीहरुको सिमानाका जनतासम्म पहुँच नपुगेकाले उनीहरु बाहिर गएका हुन् ?
यो अवैधानिक हो। यो दुवै देशको केन्द्रीय बैंकको अनुमति बिना रकम बाहिर जानु अवैधानिक हो। यसलाई रोक्नका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्छ। सरकारले शतप्रतिशत बिमा बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ। कतै कालोधनको कारणले विदेशमा बिमा गरेको पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले रोक्नुपर्छ। नेपालमा पनि धेरै रकम बिमा गर्न आउनेहरु छन् जो विदेशमा बस्छन्। त्यस्तो रकमको बिमा गर्नु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि खतरा हो। त्यसैले त्यस्ता बिमाहरुको पोलिसी नै खारेज गरिदिनुपर्छ। नेपालका जनताले भारतका कम्पनीहरुमा बिमा गर्ने प्रवृत्ति अझै छ। नेपालका बिमा कम्पनीहरुको बढ्दो उपस्थितिका कारण पनि हुन सक्छ, यो ट्रेन्ड घटेको छ। तर सरकारले एकदमै कडा गनुपर्छ। सरकारले चाहेमा दुई सेकेन्डमा रोक्न सकिन्छ। हामीले पनि फस्ने डरमा अर्बौंका रकमको बिमा फर्काइदिएका छौँ।
बिमा कम्पनीहरुलाई एकै प्रकारका पोलिसीहरु जारी हुने गरेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, युनियन लाइफको हकमा के छ ?
त्यस्तो होइन। युनियन लाइफले धेरै नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। हरेक कम्पनीले नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याएको छ त्यो कारणले पनि अहिले बजार विस्तार भएको हो। नत्र जम्मा तीन प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो। अहिले वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बिमा बजारको बढिरहेको छ। अर्को वर्ष बिमा बजार २६ प्रतिशतमा पुग्ने छ। यसको मुख्य कारण नै पोलिसी फरक भएर हो।
बिमा कम्पनीहरु सहर केन्द्रित भएको आरोप छ नि ?
पहिला थियो, अहिले बिमा कम्पनीहरु सहर मात्र केन्द्रित छैनन्। पहिला पूर्वाधारको कमीका कारण ग्रामीण भेगमा जान कठिन हुन्थ्यो। तर अहिले गाउँमा पनि जनचेतना बढेको छ, पूर्वाधार विकास भएको छ। त्यसैले गाउँगाउँ पुगेका छन्। अर्को कुरा धेरै कम्पनीका कारण प्रतिस्पर्धा बढेको छ जसले गर्दा पनि कम्पनीहरु गाउँगाउँ गएका छन्। सहरमा केही झुकाव पक्कै हुन्छ।
बिमा समितिले कम्पनीको खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लगाम हुनु अनिवार्य छ नत्र कता भाग्ने भन्ने ठेगान हुँदैन। लगामले बाटो देखाउँछ। बिमा समितिले जुन प्रकारले निर्देशन दिएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो। जनताको पैसा बिमा कम्पनीहरुले चलाएका छन्। एक त कम्पनी आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ किनकि नाफा गरेर बोनस दिनपर्ने दबाब हुन्छ। अर्कोतर्फ गलत प्रयोग हुन नदिन बिमा समितिले केही नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।
इस्योरेन्सहरुको भीडमा युनियन लाइफको पहिचान के हो त ?
यो कम्पनी प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाले खोलेको कम्पनी हो। यसमा गोल्छा, जगदम्बा, टिबडेवाला, गाडिया, न्यौपाने र राजेश हार्डवेयरलगायतका व्यापारिक समूहको लगानी छ। उनीहरुको आफ्नै प्रकारको बजारमा साखः छ। कम्पनीको व्यवस्थापनमा पनि राम्रो छ। पोलिसी पनि नयाँनयाँ ल्याउने गरेको छ जसले बिजनेस राम्रो ल्याउन सकिएको छ। हामीले पहिले नयाँ पोलिसी ल्याएपछि मात्र अरु कम्पनीले ल्याउने गरका छन्। हामीले दिने सेवा सुविधामा धेरै राम्रो छ। दाबी भुक्तानी एकै दिनमा गर्छौं। एकै दिनमा पोलिसी दिइरहेका छौँ। अभिकर्ताहरुलाई कमिसन एक महिनाभित्रमै दिएका छौँ।
कम्पनीका आगामी योजना के छन् ?
जति शाखा खोलिएका छन्, तिनीहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, नयाँ शाखाहरु खोल्ने, हरेक जिल्लामा शाखा र उपशाखा खोल्ने आगामी योजना हो। युनियन लाइफमा अहिले १५ हजार अभिकर्ता छन्। अब एक वर्षभरमा २० हजार अभिकर्ता पुर्‍याउँछौं।
मनोजकुमार लाल कर्ण (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनियन लाइफ इस्योरेन्स)